ကဗျာထဲက သားအဖ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
သား... သား... သား... တဲ့...။
သူတို့ သားအမိ သားအဖတတွေ တနေရာရာမှာ ဆုံဆည်း ပျော်ရွှင်နေကြလိမ့်မယ် လို့ ချိုသင်းတို့ ယုံကြည်သလိုပဲ ယုံကြည်နေမိတယ်...။ ယုံကြည်သလိုလဲ ဖြစ်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...။
ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဌစာအုပ်တွေကို စာသိပ်မဖတ်တဲ့ အဖေက၀ယ်လာပေးရင်း အမေ့ကို သားတော့ ဒိဌိဖြစ်တော့မယ်ကွာ ကွန်မြူနစ်ဖြစ်တော့မယ်ကွာနဲ့
နောက်တော့ ကိုယ်လည်း ဒိဌိမဖြစ် ကွန်မြူနစ်လည်းမဖြစ်ပါ ပဲ အဖေကို ခုမှပိုချစ်နေရတယ်
ဆရာကြီးကတော့ ကဗျာဆရာကြီးမို့.သူ့အချစ်ကို ကဗျာရေးသွားနိုင်ပါတယ်.အိမ်အပြန် သူကိုယ်သူ တံတားခင်းပေးဦးမယ်တဲ့ အဖေကတော့ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ သူမဖတ်တဲ့ကျနော့်စာအုပ်လေးတွေကိုင်ကြည့်နေမလား.ပဲ .ချိူသင်းရေ.မိသားစုထမင်းလက်ဆုံ စားခွင့်မရကြတာကပဲ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘ၀လား..မသိတော့ပါဘူး.ကိုကျော်ဝဏ္ဏကိုလည်းသတိယကြောင်း တချိန်ချိန် တက်တူးလာထိုးဦးမည့်အကြောင်း ကိုနေ၀င်းအောင်ကတော့ မြန်မာလို စာရိုက်ကျင့်နေလေတယ်တဲ့..
wai zin said...
ဖတ်ရတာ..လွမ်းဆွတ် မှိုင်းမှုံ.. ဘ၀ ဆိုတာ..ချစ်ပြီး ခွဲခွါ ရတာမျိုးလား။ ဒါဆို..ညဏ်မိုးက..ကျမတို့ နဲ့များ..တတန်းထဲဖြစ်မလား ။ မသိခဲ့ဘူးနော်။း(
စိတ်မကောင်းပါဘူး အမရေ။ အဖေ့ရဲ့ မေတ္တာတရားတွေက ကြီးမားလှပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ပြန်လာဖို့ လက်ကမ်းထားတာတောင် လှမ်းမဆွဲနိုင်သေးပဲ ဘ၀ ပင်လယ်ထဲ တ၀ဲဝဲလည်လည် ရှိဆဲပါ။ ကဗျာမစပ်တတ်ပေမယ့် သူလည်း လွမ်းတတ်မှာပါ။
အယူအဆချင်း မတူတဲ့ သားအပေါ် နားလည် တဲ့ အဖေရဲ့မေတ္တာပေါ့ ချိုသင်းရယ်။
ကဗျာဆရာဆိုတော့ သားနဲသူ့ အကြောင်း ကဗျာလေး ရေးလိုက် ပြန်ဖတ်လိုက်နဲ့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်မိတယ်။
အဝေးရောက်မှ အိမ်ကို အရမ်းလွမ်းတယ်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ။ အိမ်နဲ့တူတဲ့နေရာ မရှိ ဘူးဆို တာဒါ့ကြောင့်ပြောတာနေမှာ။
ဒီသားအမိ သားအဖ ပြန်ဆုံ ကြမှာပါ။
ဖတ်ရင်း ဝမ်းနည်းနေမိတယ် မရယ်။
မတို့ညီအမတတွေ ယုံကြည်သလို အတိတ်ဘဝက အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတဲ့ သားအမိ သားအဖတတွေ တနေရာရာမှာ ဆုံဆည်း ပျော်ရွှင်နေကြလိမ့်မယ် လို့ ထပ်တူယုံကြည်ပါတယ်။
မေတ္တတရား နှစ်ခု တနေရာထဲမှာ ပေါင်းစုံမိကြမယ်လို့
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ချိုသင်း ရေ
မေတ္တာတွေ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေ
အကုန်လုံး ကူးစက်ခဲ့ ပြီ...
ဆရာဆုံးတဲ့နေ့ အကြောင်း မီးရထား နိမိတ်ပုံ နဲ့ ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာနဲ့ ပို့စ်လေး ကလဲ ရင်ထဲမှာ စွဲနေတာ ခုထိပါပဲ.. အမြဲ လိုလို မမ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေတယ်
ချိုသင်းတို့သားအဖ ဓါတ်ပုံရယ်.. အဲဒီ ပို့စ်လေးရယ်..
ခုလဲ သားအတွက်အဖေ့အိမ် ဆိုတဲံ့ကဗျာလေး
မမ နှလုံးသားထဲ သိမ်းသွားခဲ့ပါပြီ..
အင်မတန် လှပ တဲ့ ၅၂၈ မေတ္တာဖွဲ့ ကလေး တပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတာ၊ ဘဘရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးထဲ လှမ်းမြင်လိုက်ရသလိုပါပဲ....။
" Come on..dude!" တဲ့:)
ရင်ထဲ သူ့သူငယ်ချင်းလိုခင်တာပဲ ဆိုပြီးပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့..
ဆုံကြမှာပါ အမ ချိုသင်းရယ်
ကဗျာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ကြည်နူး ရင်း နဲ့ရင်ထဲ ဆို့ သွားတယ် မချိုသင်း ရယ် ။
တဦးတည်းသော သားလေးဆို အချစ်ပိုမှာ ၊ အဝေးရောက်နေတဲ့ အချိန်တွေလည်း အလွမ်းပိုမှာ ၊
မချိုသင်းတို့ မိသားစုလေးက တကယ်ပဲ ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။
ခုလည်း သူတို့ သားအမိ သားအဖ တတွေ ပြန်ဆုံကြမှာပါလေ ။
ကဗျာလေးတွေဖတ်ရင်း ရင်ထဲစို့သွားပါတယ်အမရေ ...
ပန်းတွေပွင့်လည်းကဗျာဖြစ် တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ကဗျာဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး... သားအတွက် ရေးထားခဲ့တဲ့ ကဗျာနှစ်ခုစလုံးမှာလည်း အချစ်တွေကို မြင်ကြားခံစားနေရတယ်။ ရင်ထဲ ထိထိခိုက်ခိုက် ဖြစ်ရပါတယ်။
အခုလို ပြန်ပြောပြတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရယ်။
့သားအပေါ်ထားတဲ့ သူရဲ့ မေတ္တာ...ကြီးမားလှပါတယ်။
ှဆရာ နဲ့ သူ့ ရဲ့ ကဗျာတွေကို သတိရမိတယ်။
အော်..ကဗျာဆရာဆိုတော့လည်း ခံစားရတာလေးတွေကို ကဗျာလေးတွေနဲ့ ထိမိအောင်ဖွဲ့ပြနိုင်စွမ်းပါတယ်လေ..အသွင်မတူတဲ့ အဖေနဲ့သားငယ်စဉ်က မတူညီတဲ့ သဘောလေးတွေပေါ့။ သားအပေါ်လိုက်လျောနားလည်တဲ့ ဆရာ့ရင်ကိုလည်း လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်...တကယ်ဆို ဒီလိုကဗျာလေးတွေက မိသားစုပိုင် သီးသန့်ကဗျာလေးတွေပါ...ဖတ်ခွင့်ရအောင် ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ချိုသင်းကိုကျေးဇူး..။
သွားလေသူများအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ချိုသင်းရယ်..
ကိုဥာဏ်မိုးရဲ့ ကျန်ရစ်သူ အစ်မလေးဆို သူတစ်ယောက်တည်း၊ သနားပါတယ်နော်။
မသိင်္ဂီ ပြောသလိုပဲ မိသားစုဝင်တွေ အတွက် မေတ္တာနဲ့ ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဝေမျှပေးလို့ ဖတ်ခွင့်ရတာပါ။ အမတို့လိုပဲ အဖေရော အမေရော မောင် အငယ်ဆုံးလေးပါ မရှိတော့ဘူး။ ကျန်ရစ်သူများကသာ လွမ်းဆွတ်ရတာပါလေ။
၁၀နှစ်တောင် ရှိသွားပြီ။ မနေ့တနေ့ကလိုပဲ..။ အဲဒီတုန်းက ဆရာမက မော်လမြိုင်မှာ..။ ဥာဏ်မိုးသတင်းကို နောက်အကြာကြီးကြာမှ သိရတယ်..။
သိတဲ့အချိန်မှာပဲ မျက်ရည်ကျမိတာ.. သတိရနေသေးတယ်..။
ဖတ်လာပြီးမှ နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးတွေ့ ရတား(
မေတ္တာနဲ့ ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာ..စာလုံးတွေပါပဲ..ဒါပေမယ့် ကိုယ် ကြက်သီးများတောင်ထမိတယ်...။
မျိုးဆက် ၂ ခုရဲ့ကွာဟချက်ကို..၅၂၈ သွယ်သော..
မေတ္တာတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းပြထားတဲ့ ..ဦးဂျမ်း ရဲ့ မိသားစုဆိုင်ကဗျာလေးကို..ဖတ်ရတာ..ရင်ထဲမှာ..
ညည်းလဲ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်..
၁၆ နှစ်သားနဲ့ .. ကဗျာက တအုပ်ထဲ ထွက်ဖူးတဲ့ နွေဦး (၈၈ ဇွန်) ထဲက။ အဲဒီ စာအုပ်က ကဗျာတွေ သိပ်ကောင်းတာ။ အတူတူတွဲပြီး ပါခဲ့တဲ့ အောင်ချိမ့်၊ မောင်ချောနွယ် စတဲ့ ကဗျာတွေထက် ဆရာ့ကဗျာက ခေတ်နောက်ကျ မကျန်ခဲ့ဘူး ဆိုတာကို သတိထားခဲ့မိပါတယ်။
ပထမကဗျာလေးကို တော်တော် သဘောကျမိတယ်။ ကျစ်လစ်ပြီး စကားလေးတွေကို ပြောင်မြောက်လိုက်တာ။ ပို့စ်ရဲ့ နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကိုတော့ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး အစ်မရယ်။
ညီမယုံကြည်သလိုမျိုး သွားလေသူမိသားစုတွေ ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ ဆုံဆည်းနိုင်ကြမှာပါ..
စာဖတ်ရင်း မျက်ရည်တောင်ကျမိတယ် အမရယ် ....ကြည်နူးရသလို စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်...
သားအဖ သားအမိတွေ ကောင်းရာသုဂတိ ကို ရောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ဆရာ့ ကဗျာတွေ ကိုလည်း သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
အမရေ ကျွန်တော်တို့လဲ ဟိုတနေ့ကတောင် သူ့အကြောင်းပြောဖြစ်ကြသေးတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
ဥာဏ်မိုး က ကဗျာစပ်တပ်ပါတယ်။ အတိ အကျ တော့မဟုတ် သူ့ကဗျာက
"ဗန်ဂိုး က ချစ်သူကို နားရွက် ဖြတ်ပေးတယ်၊
ဥာဏ်မိုး က ချစ်သူကို အားလုံး ဖြတ်ပေးမယ်" တဲ့
ကျွန်တော်တို့လဲ တောင်ငူကန်တင်း က အရှည်ကြီးဆိုင်မှာ လဘက်ရည် သီးရော!
ကဗျာဖတ်ပြီးတော့လေ အရမ်းကိုပဲ ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်း ဖြစ်ရတယ်။
မိဘတွေရဲ့ စေတနာကို လှမ်းမြင်ရတယ်။
I'm so sorry for your father and brother. I didn't know about it. I am really touched after reading all these poems.
ချိုသင်းရယ်… ဖတ်ပြီး ဆို့ နင့်လွန်းလို့စကားလုံးတွေတောင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်… သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သားအမိသားအဖတတွေ မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုံဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်နေကြမှာပါ…
အစ်မကတော့ကျနော့်ကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစ်မအဖေနှင့်ဆရာကြီးဆရာမောင်စွမ်းရည်တို့ နှင့် ကျနော်တို့ အတူတကွစာပေအကြောင်းတွေပြောကြ။ဆရာကြီးကတကယ်လေးစားဘို့ ကောင်းသည့်ကဗျာဆရာကြီးပါလားလို့ ကိုယ်တိုင်တွေလိုက်ရတော့အထူးပဲဝမ်းသာမိပါသည်။ သို့ သော်ဆရာကြီးနှင့်ကျနော်တို့ လူချင်းမတွေ့ သေးပေမဲ့သူရဲ့ ဖန်မီးအိမ်နှင့်မိတ်ဆွေကြီးတို့ က ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာထာဝရရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါ့ကြောင်း သူရဲ့ ဖန်မီးအိမ်လေးကိုအစွဲပြုပြီးကျနော်တို့ ကဗျာဝါသနာပါသည့်လူငယ်တွေက ဖန်မီးအိမ်ကဗျာဝိုင်းလေးကိုတည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အစ်မဆီမှာ ဆရာကြီးပေးခဲ့လားတော့မပြောတတ်ဘူး။တောထဲက ကဗျာဆိုတဲ့ ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ်လေး ပါ။ကျနော့်ဘလော့ကိုလည်းလာလည်ပါလို့ ဖတ်ခေါ်ပါတယ်။ အစ်မရဲ့ ဘလော့ကိုလည်း ကျနော်ဘလော့မှာတင်ခွင့်ပေးပါလို့ ခွင့်တောင်းသွားပါတယ်။ စာနုယဉ်လေးတွေနှင့် ရသကဗျာလေးတွေများများရေးနိုင်ပါစေလို့ ။
မမမိုးချို ရေ.. ကဗျာလေးတွေရှင်းပီ အရမ်းလှတာ ဘဲ.. ဖတ်တိုင်းကိုမရိုးနိုင်ဘူး..
ဘဘ ကိုသတိရမိပါတယ်.. မမြင်ဖူးပေမယ့် အမြဲလေးစားရိုသေ ဂါဝရပြုလျှက်ပါ.
ရင်ထဲမှာ ဆို့နစ်သွားတာပဲ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။
အဟောင်းတွေကိုရှာဖတ်နေရင်းနဲ့ အမ blogကိုခုမှရောက်တယ်။ဘဘဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကဗျာလေးကိုဖတ်ရတော့ အိမ်မှာကျန်နေတဲ့ ဖေဖေ့ ကိုသတိရပြီးမျက်ရည်တွေအလိုလိုကျလာတယ်အမရယ်